Kedu ka m si bido elekọta mmadụ media? Nke a bụ ajụjụ m ga - enweta mgbe m na - ekwu maka mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa. Nke mbu, ka anyi tulee ihe mere ndi kompeni gi gha acho itinye aka na mgbasa ozi.
Ihe kpatara ndi oru ahia ji eji ahia ahia
Nke a bụ nnukwu vidiyo na-akọwa na ụzọ 7 azụmaahịa mgbasa ozi mgbasa ozi gị nwere ike ịme ka nsonaazụ azụmaahịa pụta.
Etu esi amalite na Social Media
Họrọ Social Networks gị - Chọọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na ndị ahịa n'etiti ikpo okwu mgbasa ozi ọ bụla. Adịghị m onye ofufe nke ịhọrọ otu ma leghara nke ọzọ anya. Ekwenyere m na ị nwere ike isonye n'ofe nyiwe niile - mana lekwasị anya ma lekwasị anya ebe ohere ịmalite ịmalite. Ọ bụghị ihe niile banyere demographics kwa infographic.
Dejupụta profaịlụ gị - Mgbe m hụrụ foto profaịlụ zuru oke, ndabere na-efu, ma ọ bụ profaịlụ ezughi oke, ana m ala azụ mgbe niile iso ma ọ bụ soro ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi. Were oge ịtọlite ​​ma nye nkọwa pụrụ iche, mana doro anya na-ekwupụta ebumnuche gị maka ịnọ ebe ahụ.
Chọta olu gị na ụda - Ikike agbanwe agbanwe dị mkpa n'ịntanetị, yabụ gbaa mbọ hụ na ị gosipụtara ụda na-agbanwe agbanwe mgbe ịkekọrịta ma zaghachi na mgbasa ozi mmekọrịta. Buru n'uche na ọ bụ ụwa na-arụsi ọrụ ike, nke na-ada ụda n'ebe ahụ, adala mba!
Tinye Visuals - Ihe onyonyo na vidiyo na-emetụta njikọ aka na ịkekọrịta mmelite mgbasa ozi gị nke ọma. Were foto, tinye vidiyo, hazie ụfọdụ vidiyo oge, ma kesaa obere vidiyo na akụkọ ntanetị iji mee ka ikpo okwu ọ bụla ịchọrọ itinye aka.
Họrọ Usoro Mgbasa Ozi Gị - Na nso nso a, ugboro ugboro, na ihe dị mkpa bụ okwu atọ anyị na ndị ahịa anyị gara afọ iri gara aga ma ga-aga n'ihu ịkwanye n'afọ iri na-abịanụ. Inye uru nye ụmụazụ gị dị oke mkpa! Abụghị m onye ofufe maka oke ọ bụla maka ịkekọrịta, kesaa mgbe ọ bara uru nye ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ obodo.
Zụlite Cadence - Ndị na - egwu gị na ndị na - eso ụzọ gị ga - atụ anya mmelite na - adịbeghị anya site na gị. Mgbasa mgbasa ozi na-abụkarị egwuregwu nke ọkụ ka a na-akọrọ ma nwee ekele maka ọdịnaya gị. Adala mba na mbu site na obere ndi na eso na obere mbak… soso na-aru oru ya ma adala mba! Ọ bụrụ n ’ịkwụsị - maka ebumnuche ọ bụla - ị ga - ahụkarị ndapụ dị mkpa nke ị ga - emeri ọzọ.
Akpara gị Social Kalenda - Enwere ahịa n’oge a kara aka gị? Enwere ọnụ ọgụgụ dị mkpa ị nwere ike ibugharị na ịhazi oge n'ime profaịlụ mgbasa ozi gị? Nwere ike ịhọrọ isiokwu nke ị nwere ike ikwu maka kwa ọnwa ma ọ bụ ọbụlagodi kwa izu n'ịntanetị? Hazi kalenda gị bụ ụzọ dị mma iji bulie ikike mgbasa ozi mmekọrịta gị, ọ na - enye gị ohere ịkwaa ọdịnihu ma chetara ndị gara aga ka ha soro gị.
Echefula oku na-eme ihe - Iwu nke na-ere mgbe niile anaghị arụ ọrụ na Social Media… ma na-agwa ihe mgbe niileg na-eme! Ebumnuche gị kwesịrị ịkọwa ma nye uru netwọkụ gị. Oge ọ bụla n’oge, chetara ha ihe ha nwere ike ime n’akụkụ gị na ngwaahịa na ọrụ gị. Tinye ihe ịkpọ oku na mmekọrịta gị na profaịlụ gị, ọ bụ ụzọ dị oke mkpa iji kwalite azụmaahịa karịa.
Asi na m na akuzi a Social Media Ahịa 101 klas, M ga-gbakwunye ole na ole isi azum na-efu efu na nke a infographic:
Nlekọta aha ọma - Na-eji nnukwu ihe nlekota oru mgbasa ozi nke ndi mmadu, i kwesiri ige nti maka ihe obula banyere ahia, oru ma obu ndi mmadu. Ihe ngosi oge na nzaghachi ngwa ngwa na mkpebi dị oke mkpa.
Ọgụgụ isi - Nkwukọrịta okwu na soshal midia na-enye ozi bara ụba nke ụlọ ọrụ gị kwesịrị ị payinga ntị na ya. Ajuju ajuju, nzaghachi ndị ahịa, na ozi na-ewu ewu nwere ike inye nghọta bara uru maka azụmahịa gị iji mee ihe.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa - Ugbu a, karịa mgbe ọ bụla, ndị ahịa na azụmaahịa na-atụ anya ka ụlọ ọrụ zaghachi ndị ahịa ha na-arịọ site na ọwa mmekọrịta. Ebe ọ bụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ nnọkọ ọha na eze, ọ bụ ohere dị egwu maka azụmaahịa iji gosipụta ikike ha nwere iweta mkpebi na nsogbu ndị ahịa ebe ndị ọzọ ga-ele ya anya dị ka akụ.
Setịpụ Mgbaru Ọsọ ma Nyochaa arụmọrụ - Omume dị ka ndị a, itinye aka, mmetụta, na ịkekọrịta na-eduga na-egosi na onye kwesịrị ilebara anya. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịme ka ị mata na ịmara nwere ike ịme ka ikike na ntụkwasị obi. Ikike na ntụkwasị obi nwere ike imetụta ogo nyocha engine. Ma, n'ezie, ihe a niile nwere ike ịchụpụ nsonaazụ azụmaahịa dịka njigide, nnweta na ịbawanye uru ndị ahịa.
Ihe omuma a site na Ubochi na-ejegharị azụmaahịa site na ịtọlite ​​na ịmepụta atụmatụ ha maka ire ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ma enwere ụfọdụ ndụmọdụ dị mma ebe a maka akara azụmaahịa!
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịana-amalitenjikwa ahanlekota orummetụtaọgụgụ isi mmadụelekọta mmadụ mediannweta mgbasa oziihe mgbaru ọsọ mgbasa oziarụmọrụ mgbasa ozielekọta mmadụ media njigideusoro mgbasa ozi ọha na ezebido mgbasa oziveningage